Ukuphupha ngeSeeteufel ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IMonkfish ikwabizwa ngokuba yi "monkfish" kwaye ihlala ifumaneka kubunzulu beemitha ezingama-20 ukuya kwi-1000. Inomzimba othe tyaba, onamaxolo kunye nentloko enkulu kakhulu nebanzi. Eyona nto ibalulekileyo ngumlomo wayo omkhulu, ogqunywe ngamazinyo anamandla kwaye wenza ukuba ubonakale uyingozi kakhulu. Ngokuvula umlomo wayo ngesiquphe mkhulu kakhulu, i-monkfish ifunxa ukutya okuncinci, okuqala ukutsala ngentonga yokuloba okungeyonyani.
1 Uphawu lwephupha «i-anglerfish» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ulwandle lomtyholi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «monkfish» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-anglerfish» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "umtyholi wolwandle" luthathwa njengesicelo kulowo uphuphayo ukufikelela kwisivumelwano kunye naye icala ngokweemvakalelo uxakeke kakhulu. Mva nje uye wabakhathalela kakhulu ebomini bokuvuka. Ngoku kuya kufuneka uyazi imeko yakho yeemvakalelo kwakhona kwaye uyithembe indlela oziva ngayo. Kuba ezi ziya kuliphatha iphupha liqhubele phambili kunalo naliphi na inyathelo elilawulwa yingqondo.
Uphawu lwephupha «monkfish» ikwaluphawu umxholo ongekho zingqondweni, nezinefuthe elikhulu kubomi babaphuphi. Ke ngoko, ukuphupha kufuneka kuboniswe ngephupha lakho lokuba awusebenzi ngokwengqiqo ekuvuseni ubomi njengoko wawucinga ngaphambili. Nokuba ubungazi, iimvakalelo zakho kunye nokuziphatha kwakho kunempembelelo kwizenzo zakho. I-Monkfish ephupheni inokubhekisa kwiminqweno yesini kunye nokunqwenela. Kwixesha elidlulileyo, ezi zazicinezelwe kakhulu okanye zaliwa. Ukuphupha kuzifihlile ezi mfuno nzulu. Ngoku benza indlela yabo, nangona kunjalo, kwaye iphupha kufuneka lijongane okanye lamkele ulangazelelo lwabo.
Uphawu lwephupha «ulwandle lomtyholi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, i-monkfish ephupheni luphawu lwaloo nto. eyam ijongiwe. Ke ibhekisa kwinto iyonke yokwazi kunye ne-subconscious. Ewe usathana Ulwandle lubonakala ephupheni njengokutya, uphawu lwephupha luvavanywa ngokuqinisekileyo kwaye luphawu lwamandla okomoya, alungele ukulithatha iphupha elo. Ngakolunye uhlangothi, i-monkfish ibonwa njengesilwanyana esisongelayo ephupheni, inokubonisa imixholo engekho zingqondweni, ethe tyaba ngesiquphe kubomi bephupha kwaye ikoyike.
Uninzi lweemonkfish ezidada ephupheni zicela iphupha ukuba lizikhathalele ngokwenyani. Kuya kufuneka ekugqibeleni ube nokwazi kwaye wamkele izakhono zakho kunye neempawu zakho ezibalulekileyo el mundo yomlindo. Ukubamba idemon yolwandle ephupheni kukwakhuthaza ukuba wenze okungakumbi Ukuzazi. Ukuba uphupha ukuthenga i-monkfish kumlobi weentlanzi, kungekudala unokuba nethemba lokuphumelela kunye nokuzuza kwezezimali kubomi bokuvuka.
Uphawu lwephupha «monkfish» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, uphawu lwephupha «i-anglerfish» yenzelwe ukubonisa iphupha lakho ukuba okwexeshana amandla omoya Ungalahla.